ọzụzụ ndị agadi na-elekọta agadi agadi-oge agụmakwụkwọ antwerp
Ị na-amụta na ọzụzụ ọkachamara ahụike iji mee usoro nlekọta dị iche iche n'okpuru nlekọta na nlekọta nke nọọsụ. Ị na-enyere ndị na-elekọta ndị nlekọta aka na nlekọta onwe ha na arụmọrụ kwa ụbọchị. Ị mụta otu esi ekwurịta okwu n'ụzọ ziri ezi na otu esi emeso ndị na-elekọta ahụ. Dịka onye na-elekọta gị, a zụlitere gị ịrụ ọrụ n'adabereghị na ụlọ ndị nọọsụ, n'ụlọ nlekọta ma ọ bụ na-elekọta ụlọ. Mgbe ị nwetara akwụkwọ dịka ọkachamara ahụ ike, ị nwekwara ike ịga n'ihu na ọmụmụ akwụkwọ gị na kọleji nọọsụ.
Ọzụzụ anyị na ahụike bụ ụdị abụọ nke ọzụzụ. Ịmụta ihe abụọ pụtara na ị ga-enweta ọtụtụ ahụmịhe bara uru mgbe ị na-amụ ihe na ụlọ akwụkwọ na ọrụ. a na-akwụ gị ụgwọ maka ụbọchị ị malitere ịrụ ọrụ.
Site na 1 September 2019, ndị ọkachamara ahụike nwere ike, n'okpuru ọzụzụ ọzọ nke 150 awa, rụọ ọrụ ndị ọzọ na onye ọrịa, dịka itinye anya anya ma ọ bụ ọkwa shuga ma ọ bụ ọbara mgbali. Site ugbu a gaa n'ihu, anyị na-enye ọzụzụ ọzọ.
Otu ọzụzụ ọkachamara ahụike na-ewe na nkezi otu afọ.
Ị ga-aga maka ọzụzụ a Zorgkundige agụmakwụkwọ gara aga ejiji soro.
Iji nwee ike ịgbaso usoro Zorgkundige, ọ ghaghị ịbụrịrịrịrị na ị nwetara ikike nke Ngalaba Nlekọta. Nke a nwere ike ime site na akwụkwọ ejiji iji nweta ọzụzụ nke ụlọ akwụkwọ na-arụ ọrụ oge ụfọdụ ma ọ bụ nyocha 3 Nlekọta na ọzụzụ oge nile.
Ezigbo ihe ọmụma banyere Dutch bụ ihe a chọrọ, n'ihi na nkwurịta okwu na onye nlekọta na ndị otu gị dị ezigbo mkpa.
Na-arụ ọrụ dị ka Zorgkundige bụ ọrụ mmadụ. Ị na-abịa n'otu elekọta otu onye ị ga-arụkọ ọrụ ọnụ. Gị na ndi nlekọta na-elekọta, ndị dọkịta, ndị ezinụlọ na ndị ọrụ afọ ofufo na-abata. Dịka Onye Ọrụ Ọgwụgwọ, ị nwere oge ọrụ ọrụ mgbanwe na ị na-arụkarị ọrụ.
Pịa ebe a maka ozi ndị ọzọ (VDAB website)
Enwere otutu ihe Ndị ọkachamara ahụike na ahia ahia. Ụmụ akwụkwọ nwere ọrụ n'ụlọ akwụkwọ anyị n'ụlọ akwụkwọ anyị na-ejigide ọrụ a mgbe ha gụsịrị akwụkwọ.
Ị ga-enwe ike ịrụ ọrụ, dịka ọmụmaatụ, ebe obibi nlekọta obibi, nlekọta ụlọ, ụlọ ọgwụ maọbụ na-elekọta ndị nwere nkwarụ.
Ego ole ị na-enweta dịka onye na-enye ahụike na-adabere na ọrụ gị na ma ọ na-arụ ọrụ na mgbanwe ma ọ bụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịrụ ọrụ na ụmụaka, ịnwere ike ịga akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ anyị Facilitator na Child soro.
Ọ bụrụ na ị nweta diplọma na agụmakwụkwọ ọzọ, ị ka nwere ike ịga ọmụmụ ihe dị iche iche n'ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịga n'ihu na-amụ maka nurse nke HBO, nlekọta ahụike, enyemaka ụlọ ...
Ịgwọ Ọzụzụ zuru ezu
Ị na-amụta na mmemme ahụ Zorgkundige esi enyere onye nọọsụ aka
Ị ga-edebe faịlụ nke onye nlekọta ahụ.
Ọ bụrụ na ị nyere onye nọọsụ aka, ịnwere ike ịme usoro nọnye dịka onye na-elekọta gị.
als Ejiji / Care Protection ị na - arụ ọrụ na ndị nọ n'ọnọdụ nlekọta dị iche iche.
Ịchọta na ọ dị mkpa ka onye na-elekọta ahụ nweta nlekọta kwesịrị ekwesị. Ịchọrọ ịchọta ọdịmma nke onye na-elekọta ya.
Ị nwere ike ịmatakwu ahụmahụ nke onye nlekọta na-elekọta ndị agadi na ị ga-abịakwute ezinụlọ ya n'ụzọ nkwanye ùgwù.
Ị na-akpali onye nlekọta na-elekọta gị na ọnọdụ nchedo ma na-eche n'ụlọ gị. Ị na-arụ ọrụ ọnụ na otu.
Ị nwere ike nweta ọkachamara ọrụ ọrụ na:
Ebe obibi na nlekọta na-elekọta.
Ụlọ ọgwụ, ebe obibi mmezi.
Atụmatụ maka ụlọ obibi, ndị na-agwa ndị nwere nkwarụ okwu.
Kedu àgwà nke ọkachamara ahụike?
Ndị ọkachamara ahụike na-arụ ọrụ na ọnọdụ nlekọta siri ike karị; Ị na-amalite ịrụ ọrụ n'okpuru nlekọta, emesịa na ịhapụ onwe gị.
Mara mkpa na mkpa nke ndi otu. Nlekọta nke ịdị ọcha bụ ọdịdị nke nlekọta bụ isi n'ime ụlọ na ndị agadi.
Onye ọ bụla na-elekọta ọrụ na-arụ ọrụ dịka onye so n'òtù nọọsụ. Ị na-arụ ọrụ na atụmatụ nlekọta.
Ị kwadoro ọnọdụ ndụ na ọnọdụ dị mma ma na-akwụ ụgwọ dị ukwuu maka ọdịmma onye agadi na / ma ọ bụ ezinụlọ.